असफल हुने मानिसका १० लक्षण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
असफल हुने मानिसका १० लक्षण
संसारका अधिकांश सफल मानिस पहिले असफल थिए । असफलताको सिँढी चढेर नै उनीहरु सफल भएका हुन् । तर कतिपय मानिसहरू आफू असफल भएकोमा भाग्यलाई दोष दिएर बस्छन् । उनीहरु असफल हुनुको कारण खोजी गर्दैनन् तर भाग्यलाई धिक्कारी रहन्छन् ।
यहाँ असफल हुने ब्यक्तिका १० लक्षणबारे चर्चा गरिएको छ । यी बानी हटाए सफलताको ढोका आफै खुल्छ ।
१- विना योजना कामः जसले विना योजना काम गर्छ उसले सफलता पाउने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिले कुनै पनि कुराको योजना बनाउँदैनन् सबैकुरा भगवान भरोसा हुन्छ । तर भाग्य नभएको भन्दै पछुताउँछन् । पूरा जानकारीको लागि तलको भिडियो हेर्नुस्।